Namoonni 9 balaliinsa xayyaaraa gufachiisuun shakkaman to'annoo jala oolan - BBC News Afaan Oromoo
Namoonni 9 balaliinsa xayyaaraa gufachiisuun shakkaman to'annoo jala oolan
Madda suuraa, Ethiopian Civil Aviation Authority
Namoonni to'attoota tiraafika qilleensaa Itoophiyaa hojii akka dhaabaniif gorsuufi balaliinsa idil- addunyaa gufachiisuuf yaalaniiru jedhaman sagal to'annaa jala oolfaman.
Namoonni Sivil Aviyeeshinii Itoophiyaa balaliinsa idil-addunyaa akka gufatu yaalanii fi oggeessoonni to'attoonni tiraafika qilleensaa hojii akka dhaabaniif gorsaa fi ogganaa turan jechuun shakkaman sagal to'annoo jala olfamaniiru.
Ittaanaan Komishinara Poolisii Federaalaa Janaraalaa Takollaa Ayikokiru akka ibsaniitti, namoonni kunneen balaliinsa keessattu xiyyaaroonni biyya alaatii dhufan akka hin qubannee yaalii taasisaa turan jedhaniiru.
''Walitti bu'iinsa Beenishaanguliin namootni 13 lubbuu dhaban''
''Yeroon Oromoon itti tokkoomu gaheera'' Oromoo Ormaa
Ittanaan Komishinaraa Janaraal Takollaa akka jedhaniitti, namoonni kunneen ajajni mana murtii itti bahuun ta'annoo jala kan olfaman yoo ta'u, wayita ammaa kanattis qorannoon irratti gaggeefamaa jiraachuu himusaanii FBC gabaaseera.
Torban darbe kaasee to'attoonni tiraafika qilleensaa buufataale xayyaaraa Finfinnee, Baahirdaariifi Maqaleetti argaman moormii hojii dhaabuu irra turan.
Komii to'attoota tiraafika qilleensaa
Waldaan to'attoota tiraafika qilleensaa Keeniyaa balaliinsi Itoophiyaa keessatti taasifamu balaa qabaachuu mala jechuun sodaa qabu ibseera.
Abbaan taayitaa Siiviil Aviyeeshinii Itoophiyaa garuu balaliinsi Itoophiyaa keessaa hundi rakkoo tokkollee akka hin qabneefi inuma yeroo duraanii caalaa qulqullinaan hojjetamaa jira jechuun ibsa baasee jira.
To'attoonni tiraafika qilleensaa, buufataale xayyaaraa Finfinnee, Baahirdaariifi Maqaleetti argaman, moormii hojii dhaabuu irra jiran.
Mootummaan dhiyeessii qorichaafi biroof Tigraayitti balalii guyyuu hayyamuu hime
Namtichi kutaa motara xiyyaaraa keessa dhokate balaliinsa sa'aa 11 booda lubbuun argame
Google Afaan Oromootiin tajaajila jalqabuuf hiikkaan jechootaa maalirra jira?
Mootummaan dhiyeessii qorichaa fi deeggarsa biroof Tigraayitti balaliisa guyyuu hayyamuu hime
Miseensi paarlaamaa UK Musliima tahuu koon hojiirraa ittifame jette